Trump oo dhexdhexaadinaya Masar, Itoobiya iyo Sudan - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
Trump oo dhexdhexaadinaya Masar, Itoobiya iyo Sudan
November 7, 2019 at 13:59 Trump oo dhexdhexaadinaya Masar, Itoobiya iyo Sudan2019-11-07T13:59:24+01:00 WARARKA SOOMAALIYA
Dowladaha Masar, Itoobiya iyo Sudan waxay isku raaceen in heshiis kama-dambeys ah ay ka gaaraan khilaafka biya xireenka wayn ee Itoobiya ay saareyso webiga Nile.
Heshiiska ugu dambeeya waxay isla gaari doonaan bisha January ee sannadka soo socda, 2020.
Wasiirada Arrimaha Dibadda ee seddaxda dal ayaa isugu tagay Mareykanka si xal looga gaaro khilaafka diblumaasiyadeed ee muddada soo jiitamayay, kaas oo ka dhashay dhismaha biya xireenka Waqooyiga Itoobiya.
Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya ayaa horey u sheegay in cidna aysan joojin karin dhismaha biya xireenka kaas oo boqolkiiba 70% la dhameystiray.
Masar waxay ka walaacsan tahay saameynta uu dhismahaas ku yeelan karo biyaha dalkeeda gaaraya ee webiga Nile, iyo qeybta ay Sudan isticmaali karto.
Marka la dhammeeyo dhismahan biya xireenka oo ay ku bexeyso $4 bilyan oo dollar, wuxuu noqon doonaa midka ugu weyn Afrika ee koronto laga dhaliyo, laakiin muran iyo khilaafyo kale ayaa sababay in dhowr goor dib loo dhigo.
Warsaxaafadeed loo dhan yahay oo uu soo saaray Xoghayaha Maaliyadda Mareykanka Steven Mnuchin ayaa lagu yiri: “Wasiirada waxay isku raaceen in ay ka wada shaqeeyaan in heshiiska la wada saxiixo ugu dambeyn bisha January 2020. Waxayna isugu imaan doonaan Washington, 9-ka December 2019 iyo 13 ka January 2020, si loo qiimeeyo looguna taageero horumarka ay gaareen”.
“Haddii heshiis ay gaari waayaan illaa 15-ka January ee 2020, wasiirrada waxay isku racayaan qodobka 10-aad ee heshiiskii 2015-kii oo la meelmarin doonaa,” ayaa lagu yiri warbixinta.
Qodobka 10-aad wuxuu qorayaa: “Seddaxda dal waxay xallinayaan khilafka, ka dhalan kara fasiraadda ama meelmarinta heshiiska, iyadoo la raacayo hannaanka wadatashiga iyo wadahadalka taas oo waafaqsan xeerarka is aaminaadda wanaagsan.”
Waxaa sidoo kale hadda la isku raacay in kulamada mustaqbalka dhici doona in ay ka qeybgalayaan Baanka Adduunka iyo Mareykanka oo kor joogto ka noqonaya.
Madaxweyne Donald Trump wuxuu bartiisa Twitter-ka ku daabacay sawirka kullankii uu la yeeshay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka masar, Itoobiya iyo Sudan.
« Kulanka Wasiirada- Jubbaland Oo Looga Hadlay Arrimo Xasaasi Ah
Arsene Wenger oo shaaca ka qaaday halka dhibaato ee Eden Hazard ku heysata kooxda Real Madrid »